၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ မူကြမ်းတရပ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို တင်သွင်းထားပြီး၊ အခု ရက်ပိုင်းအတွင်း အပြီးသတ်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရ NLD ပါတီအနေနဲ့ လွှတ်တော်တွင်း ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကြိုးပမ်းချက် ဘယ်အထိ ခရီးပေါက်နေပြီလဲ၊ အခု တကြိမ်ပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကတော့ အများပြည်သူ မျှော်လင့်သလိုအထိ ဖြစ်လာနိ်ုင်ပါ့မလား. အခု အင်္ဂါနေ့ ည တိုက်ရိုက်လေလှိုင်းအစီအစဉ်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒပွေငျဆငျရေးဆိုငျရာ မူကွမျးတရပျ ပွညျထောငျစုလှတျတျောကို တငျသှငျးထားပွီး၊ အခု ရကျပိုငျးအတှငျး အပွီးသတျဆှေးနှေးကွမှာဖွဈပါတယျ။ အာဏာရ NLD ပါတီအနနေဲ့ လှတျတျောတှငျး ဖှဲ့စညျးပုံပွငျရေးကွိုးပမျးခကျြ ဘယျအထိ ခရီးပေါကျနပွေီလဲ၊ အခု တကွိမျပွငျဆငျခကျြမူကွမျးကတော့ အမြားပွညျသူ မြှျောလငျ့သလိုအထိ ဖွဈလာနိုငျပါ့မလား. အခု အင်ျဂါနေ့ ည တိုကျရိုကျလလှေိုငျးအစီအစဉျမှာ ဆှေးနှေးဖို့ စီစဉျထားပါတယျ။